Ibon Martín: ndiani iye, anonyora sei uye ndeapi mabhuku aakaburitsa | Zvazvino Zvinyorwa
Kunobva Ibon Martín: Heraldo de Aragón
Ibon Martín ndomumwe wevanyori veSpanish ari kuwedzera. Kana iwe uchida zvinyorwa zvine hunyengeri, chimwe chakavanzika uye pamusoro pezvese hoko, uyu ndiye mumwe wevanyori izvo izvozvi, bhuku rinobuda, bhuku rinokunda.
Asi, Ibon Martín ndiani? Ndeapi mabhuku awakanyora? Chinyoreso chako chakadii? Kana usati wazvinzwa; kana kana iwe uchimuziva asi uchida kuziva zvakawanda nezve hupenyu hwake, ipapo isu tinokuudza iwe nezvemunyori.
1 Ibon Martín ndiani
1.1 Ibon Martín semunyori wenhau
2 Chinyoreso chako sei
3 Mabhuku eIbon Martín
Ibon Martín ndiani
Ibon Martín mutori wenhau. Akazvarwa muna 1976 muDonostia uye akadzidza utapi venhau kuYunivhesiti yeBasque Nyika. Mushure mekupedza degree rake, sevamwe vaaidzidza navo, akatanga kushanda. Mabasa ake ekutanga aive munhau dzemuno, izvo zvakamupa mukana uye akashanda semuitiro wekushandisa ruzivo rwaakange awana mumusika wevashandi.
Nechikonzero ichocho, uye chimwe chinhu chisingazivikanwe nevakawanda, ndizvo Ibon Martín akatanga kunyora nezvekufamba. Kwaari, kwaive kushuvira chaiko, nekuti iye anoda kufamba, uye kugona kushanda mune chimwe chinhu chaunoda nguva dzose chiri nani. Nechikonzero ichi, kwemakore akati wandei akazvipira kunyora munhau nezve mafambiro nemigwagwa. Akanyora akati wandei mabhuku ekufambisa, kunyanya pamigwagwa kuburikidza neBasque Nyika. Nekudaro, akazove mumwe weakanakisa nyanzvi mukushanya kwekumaruwa uye varaidzo muBasque Nyika. Uye ndezvekuti mabhuku ake haana kungotarisa kumatunhu anozivikanwa kwazvo epasi, asi akawanawo zvimwe zvidiki zvinozivikanwa, izvo zvaive zvisiri zvekushanya asi zvaive nezvakashamisa kana kukuita kuti udanane zvakanyanya kupfuura vekutanga. Uye zvakare, akapa akawanda matipi uye dzimwe nzira dzemigwagwa kana nzira dzekufamba, senge nemotokari kana kubva kudhorobha kuenda kune rimwe. Kuti aite izvi, akawana rubatsiro kuna vlvaro Muñoz Gabilondo, mumwe munyori wemuno uye nyanzvi yenzvimbo nenzvimbo dzavakanyora nezvazvo.
Ibon Martín semunyori wenhau
Kwemakore, Ibon Martín akafamba munzira dzeBasque Nyika uye akazvipira kushambadza mafambiro ekufambisa kuti nzvimbo idzi dzizivikanwe, kunyanya kudzorera kukosha kwavakambove nako. Uye zvaive kuburikidza nemabhuku aya kuti akagadzira pfungwa yenhau yake yekutanga, "Mupata Pasina Zita."
Uyu Aida kuchengeta midzi yake uye neimwe nzira kusanganisa kuda kwake kwekufamba uye kusvika pakuziva izvo zvisingazivikanwe uye zvakakosha zvinhu munzvimbo iyi nepfungwa iyoyo yaaifunga. uye izvo zvishoma nezvishoma zvaive zvichinyatsobuda nevatambi uye rangano.
Muchokwadi, mushure meyo novel, akaramba achiburitsa, mune iyi nyaya mabhuku mana, ayo akaiswa mungano uye ngano dzesango reIrati, mutambo unofadza weNordic wakamubaya.
Parizvino, anoenderera mberi nekunyora. Bhuku rake razvino, "Awa yegungwa", rakaburitswa muna 2021 uye parizvino ari kubudirira chaizvo, achimuvimbisa saiye nyanzvi yekufungidzira. Muchokwadi, inongotariswa nenzira iyoyo kuSpain, asiwo epasirese vanokodzera seyakadaro uye vaparidzi vanoverengeka vekunze vakatomisa maziso avo pairi kutsikisa mabasa avo mune mimwe mitauro.
Saka tinosangana nemunyori ane mugwagwa wakareba pamberi pake, uyo anonyatso kuunza nemamwe mazhinji makuru emabhuku.
Chinyoreso chako sei
Kwayaka: Huffington Post
Avo vakaverenga Ibon Martín vanobvumirana pane izvozvi: iye anoziva kukochekera muverengi. Maitiro aanoratidzwa, nemabatiro ainoita vatambi uye marongero anoita nyaya vanovaita kuti vamirire kutevera kuti vazive zvichaitika kune vatambi, asiwo nechakavanzika icho icho pakupedzisira chinova chinoitika chemuverengi.
Izvo zvakare zvinomiririra iyo atmospheres uye zviitiko zvinotsanangurwa, zviri zvechokwadi uye zvakatendeka kune izvo zvinoonekwa, kuti vazhinji vanosarudza dzimwe nguva kuenda kunzvimbo idzodzo kunozvionera vega (pamwe nekuda kwehukama hwavo nemabhuku ekufambisa andakanyora kare).
Uye zvakare, hapana mubvunzo kuti anoita tsvagiridzo yakawanda yemanovels ake, sezvo iwo madudziro uye nzira dzekuita kwevanhu, pamwe nezano uye zvakavanzika pachazvo, zvine hwaro. Nechikonzero ichi, anoshandisa nguva yakawanda achizviongorora kuti akwanise kujekesa novel uye kuti hapana pfumo rakasununguka rinogona "kuvhiringidza" muverengi.
Mabhuku eIbon Martín
Kana iwe uchangobva kusangana nemunyori uye uchida kuziva kuti ndeapi mabhuku aakanyora, isu tinokuudza kuti haana akawanda pamusika. Asi zvakadaro. Uye nderekuti basa rake rekunyora rakatanga mu2013, paakaburitsa bhuku rake rekutanga, "Mupata usina zita."
Uyu munyori, sevamwe vazhinji, inongoburitsa novel imwe chete pagore, uye isu tinofanirwa kuziva kuti mu2018 haana kuburitsa, saka isu tinofanirwa kuchikwereti chake mabhuku manomwe ekunyora kwake. Izvi ndeizvi:
Mupata usina zita.
Iyo mumvuri fekitori.
Kutamba kwema tulips.
Inofanira kutaurwa kuti ina eaya mabhuku - Iyo Tulip Dhanzi, Iyo Munyu Cage, Yekupedzisira Akelarre uye Iyo Shadow Fekitori - vari chikamu cheLightouse Mhosva kuunganidzwa.
Tinogona kusimbisa kubva mumabhuku, semuenzaniso, kuti Iyo Tulip Dance yakazviita pane anotengesa zvakanyanya zvinyorwa, izvo zvakaita kuti basa rake rikwire nenzira yemamiriro ekunze uye vazhinji vakatanga kumuona akamira mukati meanonakidza mhando mukati nekunze nyika. Zvisinei, yakanga isati yasvika nguva yevaSeagulls paakawana zita rekuti master of suspense.
Zvino zvaunoziva Ibon Martín zvishoma, inguva yekuti, kana usati waverenga chero chinhu nezvake, unokurudzirwa kuti udaro. Iwe unogona kutanga neruzivo rwake rwekutanga, uye nekudaro uzive shanduko iyo peni yake yakaitika. Asi iwe unogona zvakare kutanga neyekupedzisira yakatumirwa uye, kana uchida, tsvaga dzakapfuura. Kunze kwemabhuku mana aya anoumba Iyo Lighthouse Mhosva, mamwe ese anogona kuverengerwa zvakasununguka. Kana iwe uchinge watomuziva uye wakamuverenga, iwe unokurudzira chero ripi zvaro remabhuku ake kupfuura rimwe? Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ibon Martin
Carlos Ruiz Zafón: mabhuku
María Dueñas: mabhuku